ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (Reward Foundation မှ) မှသင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော 'မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ'
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ ICD-11: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder
(ထိုဆုကြေး Foundation က) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တို့ကစိတ်ကျန်းမာရေး Disorder အဖြစ်ခွဲခြား '' compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ''
18th ဇွန်လ 2018, ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး၏စာရေးဆရာများ, 11 တွင်th တည်းဖြတ်မူ, လာမည့် ICD-11 များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဗားရှင်းယခုရရှိနိုင်အွန်လိုင်းကြောင်းကြေညာစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိထွက်ထားတော်မူ၏။ ဒါဟာ (ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ပါဝင်သည်မူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်).
အဆိုပါစာနယ်ဇင်းလွှတ်ပေးရေး WHO က site ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ အဆင်ပြေဘို့ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အပြည့်အဝ၌ပြန်ထုတ်ပေးပါပွီ။
အဆိုပါ ICD-11 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါအဖြစ်ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အပွငျဖျောပွထားသနှင့်မည်ကဲ့သို့ကျား incongruence ယခုခွဲခြားထားပါသည်။
ဒါဟာမ ဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ် အခြားသစ်ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေကို: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ"သောထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်" Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန် "။
အဆိုပါ "ဖြန့်ချိမှတ်စုများ"တစ်ခုချင်းစီကိုရောဂါလက္ခဏာတွေအောက်မှာဒီကြေညာချက်ပါဝင်သည်: "ဟုအဆိုပါ ICD-11 MMS ကိုများအတွက်ကုဒ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတည်ငြိမ်ဖြစ်၏။ "
ဤတွင်ရဲ့ သည် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" ရောဂါ၏နောက်ဆုံးသောစာသား:
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ [6C72] နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းများအတွက်တရားဝင်, Self-ထင်ရှားရောဂါ။ အသစ်က codes တွေကို၏အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနေရာတိုင်းမတူပေမယ့်အရေးကြီးဆုံးအရာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတန်ရာတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူမည်သူမဆိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ကျယ်ပြန့်ထီးအသုံးအနှုန်းပါပဲ။ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" ကိုလည်းရောဂါရှာဖွေကျွမ်းကျင်သူ Jon အီး Grant က, JD, MD အတွက် MPH မှအဆိုအရ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexuality အဖြစ်ရည်ညွှန်း" ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှု (ဖေဖော်ဝါရီလ 2018: p.3) ။ အသစ် CSBD ရောဂါလည်းပြင်းထန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု-related လက္ခဏာတွေရှိသူများရှာဖွေရေးမှာရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူလူဦးထက်ပို 80% အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ပါ။
"ပြseveralနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုထင်ရှားစေနိုင်သည် (စာပေတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ Kafka, 2010; Karila et al, 2014; Wéry & Billieux, 2017) လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံစားနေရသူ ၈၀% ကျော်သည်အလွန်အကျွံ / ပြproblemနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည် (Kafka, 80; Reid et al ။ , 2010) ။ (နှစ်ဦးစလုံး et al ။ 2018: 2)
အဆိုပါ WHO ကကဲ့သို့ diagnostic လက်စွဲ ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11) နှင့်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအစည်းအရုံးရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) "စွဲ" နှုန်း se အဖြစ်စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများတံဆိပ်ကပ်ကြပါဘူး။ သူတို့က "Disorder ။ " ကြိုက်တတ်တဲ့
တစ်ဦးက "အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" ရောဂါအချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ (ဥပမာ6လအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ကျော်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့, ပြင်းထန်သော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်တိုကျတှနျးထားရန်ပျက်ကွက်တဲ့ပုံစံကနေပေါ်ပေါက်။
တစ်ဦး CSBD ရောဂါ Making
အစောပိုင်းဝေဖန်သူများကမည်သည့်တရားဝင်ရောဂါလက္ခဏာကိုမဆိုလိင်လူနည်းစုများနှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အထများကိုရောဂါဖြစ်ပွားစေရန်အသုံးပြုမည်ဟုစိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် CSBD အတွက်အဖြေရှာရန်အတွက်ပြtheနာရှိသောအပြုအမူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အမြဲတစေသိသိသာသာစိတ်သောကရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သိသိသာသာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ရောဂါအသစ်ဟာလူနာအပေါ်အခြေခံပြီးရောဂါရှာဖွေတာမဟုတ်ပါဘူး ဘာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ဒါဟာမြဲချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲအပျေါအခွခေံလူနာ diagnoses ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုလျှင်, ဘာပဲပုံစံကကြာ, မသစ်ရောဂါအတွက်ရလဒ်တွေကိုလျှောက်ထားမည်မဟုတ်။
အခြားအဝေဖန်သူများကတစ်ဦး CSBD ရောဂါအဘယ်သူ၏အပြုအမူမဟုတ်ခဲ့, တကယ်တော့, compulsive နှင့်သူ၏ဒုက္ခဆင်းရဲလူနာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်လူနာအားဖြင့်မှားရောဂါဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါသတိပေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်များတားဆီးဖို့, အသစ်သောရောဂါ "လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့အကြောင်းကိုကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြမြားနှငျ့မရရှိခြင်း၏ဖို့လုံးဝဆက်စပ်ကြောင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေ။ " ကြောင်းထောက်ပံ့တစ်နည်းတစ်လူနာအမှန်တကယ် Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်နှင့်သူဖြစ်ရမည် ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့သည်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး။
diagnostic လက်စွဲ Debate
ICD-11 အတွက်သစ်ကိုခွဲခြားများ၏ထုတ်ဝေဖို့ခဲတက်၌များစွာသောဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိခဲ့သည်။ (hypersexual ရောဂါအဖြစ်အလေ့အကျင့်အတွက်ရည်ညွှန်း) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ DSM-5 အတွက်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဦးဆောင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အဆိုအရ "ဒီဖယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, သုတေသနနှင့်ကုသရေးအားထုတ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်တရားဝင်ရောဂါမရှိဘဲ Clinician ထားခဲ့တယ်။ " (Potenza et al ။ 2017)
ယခုအဘို့, သစ်ကို CSBD ရောဂါ၏မိဘအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Pyromania [6C70] Kleptomania [6C71] နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Explosive Disorder [6C73] အဖြစ် diagnoses ပါဝင်သည်သော Impulse Control ကို Disorders သည်။ သို့သျောလညျးသံသယစံအမျိုးအစားအကြောင်းကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယေးလ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မာ့ခ် Potenza MD ပါရဂူဘွဲ့နှင့်မာတေယူချ် Gola ပါရဂူဘွဲ့, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီမှာသုတေသီများနှင့်တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား San Diego မှထွက်ညွှန်အဖြစ်အခြားမော်ဒယ်များပါပြီအဖြစ်, "တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြား၏လက်ရှိအဆိုပြုလွှာကိုအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပြုထား ... ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာရှိပါတယ်။ "(Kraus et al 2018)
မှတ်သားသင့်သည်မှာ ICD-11 သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့် Impulse Control Disorders အောက်ရှိရောဂါနှစ်ခုလုံးအောက်တွင်လောင်းကစားခြင်းရောဂါလက္ခဏာများပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ရောဂါအမျိုးအစားများကိုအစဉ်မပြတ်သီးသန့်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။နှစ်ဦးစလုံး et al ။ 2018: 2) ။ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုသည်အချိန်နှင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါကိုမူလက DSM-IV နှင့် ICD-10 နှစ်ခုလုံးတွင်တွန်းအားပေးရောဂါဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လက်တွေ့နားလည်မှုတိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါကို“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါ” (DSM-5) အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ “ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကြောင့်ရောဂါ” (ICD-11) ။ CSBD ရောဂါအသစ်သည်လောင်းကစားရောဂါကဲ့သို့အလားတူဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဒီဆွေးနွေးမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံ, အ ICD-11 အတွက် CSBD ၏လက်ရှိပါဝင်သူတို့ကိုပိုကောင်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များညှိနှိုင်းရန်ကူညီရန်ထိရောက်သောလက်တွေ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများလိုအပ်နေသောကြောင့်လူရှိတယ်တဲ့ကြိုဆိုနှင့်လိုအပ်သောအသိအမှတ်ပြုပေးသည်။ ဒါဟာအစပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အများကြီးလိုအပ်အနာဂတ်သုတေသနလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
“ DSM နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD) သည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်သင့်လျော်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်လောင်းကစားရောဂါ (ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်၎င်းကို DSM-IV နှင့် DSM-5 (ICD-10 နှင့် ICD-11) တွင်မည်သို့အာရုံစိုက်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ DSM-IV တွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကို“ အခြားနေရာများတွင်မသတ်မှတ်ထားသော Impulse-Control Disorder” ဟုအမျိုးအစားခွဲထားသည်။ DSM-5 တွင်၎င်းကို“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်ရောဂါ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ CSB တွင်အလားတူချဉ်းကပ်မှုမျိုးကိုကျင့်သုံးသင့်သည်။ ICD-11 တွင်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ရောဂါအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် (Grant et al ။ , 2014; Kraus et al ။ , 2018) "။ ဤရွေ့ကားကိုးကားကနေယူထားပါသည် Gola နှင့် Potenza 2018.
၏ပါတီအားအတွက် ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) ကစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအဖြစ်ဂိမ်းရောဂါနှင့် CSBD ခွဲခြားတစ်ဦး ထဲမှာအစီရင်ခံစာ ဂေါကလူကြီး သတင်းစာကဖော်ပြသည်မှာလန်ဒန်ဆေးရုံသည်လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ပထမဆုံးသောအမျိုးသားကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်ထောက်ပံ့သောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစင်တာကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ အခြားနေရာများရှိလိင်ကုထုံးပညာရှင်များသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အွန်လိုင်းစကားပြောခန်းများကိုအတင်းအကျပ် သုံး၍ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြsufferingနာများခံစားနေရသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူလူငယ်များတိုးပွားလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
မာတေယူချ် Gola ပါရဂူဘွဲ့, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီမှာတက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား San Diego မှမှာသုတေသီအဆိုအရသစ်ကို CSBD ရောဂါအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ "ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေရှာတဲ့စံအထဲကသတ်မှတ်။ ထိုမှတပါး, လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ယခုရောဂါလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ တရားဝင် CSBD ရောဂါမရှိရင်, များစွာသော Clinician compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မပြည့်မရှိကြ၏။ နောက်ဆုံးတော့ဒီရောဂါလည်းပိုပြီးလူနာအာမခံဖုံးကုသမှုရယူပေးနိုင်ဘူး။ ထိထိရောက်ရောက် CSBD ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကပိုပြီးတသမတ်တည်းလေ့လာမှုများအဘို့ခွင့်ပြု, အလားအလာမှဦးဆောင် "Gola သစ်ကိုရောဂါ, သူကဆက်ပြောသည်" စံချိန်စံညွှန်းမီ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောချဉ်းကပ်။ "
လူနာများအဘို့တိုးလာ Access ကို
ရှိန်ဒဗလျူ Kraus, Ph.D ဘွဲ့ကို စိတ်ရောဂါကုသမှုလက်ထောက်ပါမောက္ခနှင့်မက်ဆာချူးဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ အက်ဒစ်နပ်စ်ရော်ဂျာအောက်မေ့ဖွယ်စစ်ပြန်ဆေးရုံရှိအမူအကျင့်စွဲဆေးခန်းညွှန်ကြားရေးမှူးကရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍“ ဒီဟာကကောင်းတဲ့ပထမခြေလှမ်းပဲ။ ICD-11 တွင် CSBD ပါ ၀ င်မှုသည်လူနာများ (နိုင်ငံတကာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း) ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပါ ၀ င်မှုသည်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများကိုသမိုင်းကြောင်းအရအာရုံစိုက်ထားသောသုတေသနရန်ပုံငွေကိုလည်းတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒါကထိခိုက်နစ်နာသူတွေအတွက်အမည်းစက်ကိုလျှော့ချပြီးပြtheနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပံ့ပိုးပေးသူရဲ့ပညာရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ICD-11 လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုအမြန်ရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံတွေကို manual ရဲ့ diagnoses အပေါ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များလေ့ကျင့်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသီများကလည်း Clinician နှင့်တိုင်ပင်မှူးမတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားဖြစ်လာကြောင်းတိုက်တွန်းခဲ့သည်ခဲ့ကြပြီးပိုကောင်းတဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနားလည်ရန်:
တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အကူအညီတောင်းခံနိုင်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ (ဆိုလိုသည်မှာဆရာ ၀ န်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူများ) သည် CSB များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ CSB အတွက်ကုသမှုခံယူရန်ဘာသာရပ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သောကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများအရ CSB ခံစားနေရသောသူများသည်အကူအညီတောင်းရန်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရာတွင်အတားအဆီးများစွာကြုံတွေ့ရကြောင်းမကြာခဏကြားသိခဲ့ရသည် (Dhuffar & Griffiths, 2016) ။ လူနာများထိုကဲ့သို့ပြဿနာများတည်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုရှိပါတယ်, ဤလူတစ်ဦးချင်းစီသည်ကြားမှ (ကုသအစားလက်ခံသင့်တယ်အကြံပြုမပြည်နယ်, Clinician ခေါင်းစဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်စေခြင်းငှါသတင်းပို့သည် CSBs အတ္တ-dystonic နှင့်ခဲခံစားရပေမည် ) မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ CSB ရောဂါများအတွက်ကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများ CSB ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေး, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အခြားပံ့ပိုးပေးအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောအထွေထွေသမားအဖြစ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအပါအဝင်အခြားအစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ "(Kraus et al 2018)
အဆိုပါ ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသိပ္ပံကိုပရိသတ်များထံလက်လှမ်းမီစေသည့်ရှေ့ဆောင်ပညာရေးဆိုင်ရာပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်သည် လန်ဒန်ရှိအထွေထွေရောဂါကုဆရာ ၀ န်များတော် ၀ င်ကောလိပ်မှကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စိတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ၁ ရက်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုထောက်ခံသည်။ အောက်ဖော်ပြပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပညာရှင်များအကြားလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းများတွင်လည်းသင်ကြားပြီးယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆရာများသင်ခန်းစာအစီအစဉ်များနှင့်သင်တန်းများပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောအန္တရာယ်များကိုသိရှိစေရန်အစီအစဉ်များပြုလုပ်လိုသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
အဆိုပါအပြည့်အဝကိုစာသား ICD-11 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်.
WHO ကရောဂါများသစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD 11) 18 ဇွန်လ 2018 သတင်းဖြန့်ချိဂျီနီဗာဖြန့်ချိ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကရောဂါများ၎င်း၏အသစ်ကနိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ထုတ်ယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ICD သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်စာရင်းအင်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာများ၊ ရောဂါများနှင့်သေခြင်းအကြောင်းရင်းများအတွက်ထူးခြားသောကုဒ် ၅၅၀၀၀ ခန့်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။
"ဒီ ICD ၏အမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ် WHO ကတစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒေါက်တာ Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာလူတွေနေမကောင်း get နှင့်သေစေသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသိပ်နားလည်ရန်နှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခတားဆီးများနှင့်အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်အရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ "
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းလုပ်ခဲ့သော ICD-11 သည်ယခင်ဗားရှင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုပေးသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်လုံးဝအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသောပုံစံရှိသည်။ ထို့အပြင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သောအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ရန်အဆိုပြုချက်များတင်ပြသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများတွင်မကြုံစဖူးပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုများရှိခဲ့သည်။ WHO ဌာနချုပ်ရှိ ICD အဖွဲ့သည်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အဆိုပြုချက်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ICD-11 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကမွေးစားဘို့မေလတွင် 2019 အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်နှင့် 1 ဇန်နဝါရီလ 2022 အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဤသည်လွှတ်ပေးရန်နိုင်ငံတွေ, ဗားရှင်းအသစ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ဘာသာပြန်ချက်များကိုပြင်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကြိုတင် preview ကိုဖြစ်ပြီး, အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်ရထားကျန်းမာရေးပညာရှင်များ။
အဆိုပါ ICD လည်းသူ၏ငွေကြေးပြန်လည်ပေးချေ ICD နိုင်တဲ့ coding အပေါ်မူတည်ကျန်းမာရေးအာမခံကအသုံးပြုလျက်ရှိ၏ အမျိုးသားရေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာမန်နေဂျာများ, ဒေတာစုဆောင်းခြင်းအထူးကု; နှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအတွက်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနှင့်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များခွဲဝေချထားဆုံးဖြတ်ရန်သူ။
အသစ် ICD-11 လည်းဆေးပညာနှင့်သိပ္ပံနားလည်မှုတိုးတက်လာအတွက်တိုးတက်မှုထင်ဟပ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မွှားခုခံစပ်လျဉ်း codes တွေကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမွှား Resistance Surveillance စနစ် (Glass) နဲ့အညီပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးရုံများအတွက်မလုံခြုံ Workflows အဖြစ် - - ဖော်ထုတ်နှင့်လျှော့ချနိုင်ပါတယ် ICD-11 ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေခြင်းအလိုငှါမလိုအပ်သောဖြစ်ရပ်များဆိုလိုတာကလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုကောင်းဖမ်းယူ data တွေကိုပေးနိုင်သည်။
အသစ် ICD လည်း, တိုင်းရင်းဆေးအပေါ်အသစ်တစ်ခုအခန်းကြီးပါဝင်သည်: လူတွေသန်းပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တိုင်းရင်းဆေးကိုသုံးပါပေမယ့်, ကဒီစနစ်အတွက်ခွဲခြားစဖူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်နောက်ထပ်အသစ်ကမျြးအခနျးကွီးယခင်ကအခြားနည်းလမ်းခွဲခြား (ဥပမာကျားမ incongruence စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ပါတယ်) သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားဖော်ပြထားခဲ့အခြေအနေများအတူတကွတတ်၏။ ဂိမ်းရောဂါစွဲလမ်းမမှန်ပေါ်တွင်အပိုင်းပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ။
"ဒီတည်းဖြတ်မူအတွက်တစ်ဦးက key ကိုမူအရအဆိုပါနိုင်တဲ့ coding ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အီလက်ထရောနစ်လက်ဆောင်ရိုးရှင်းဖို့ဖြစ်တယ် - ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာနဲ့လုံးဝစံချိန်အခြေအနေများခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်" ဟုဒေါက်တာရောဘတ် Jakob, အသင်းခေါင်းဆောင်, ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံဝေါဟာရများနှင့်စံချိန်စံညွှန်း, WHO ကပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ Lubna Alansari, ကနျြးမာရေးမက်ထရစ်နဲ့အတိုင်းအတာအဘို့အ WHO ကရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, says: "ICD ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် ICD-11 ရောဂါ၏ပုံစံများတစ်ဦးကို up-to-date ဖြစ်အောင်အမြင်ကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ "